Maitiro Ekuisa Icefilms Kodi Addon Muna 2017 - WebSetNet
Maitiro Ekuisa Icefilms Kodi Addon Mu 2017
Is Icefilms FIX Kodi Addon haisi kukubatsira iwe mu2017? Heano maitiro ekuisa nenzira yakakodzera pane yako iripo Kodi set-up.
Maitiro aya achashanda pane chero vhezheni yeIni 17 Krypton zvisinei ne Hardware yauri kuitisa, uye ichakurumidza kukupa iwe kuwana raibhurari inoshamisa yezvinyorwa zvemidiya.
Icefilms yakawedzera mukurumbira wekugona kupa sarudzo inoshamisa yemhando yepamusoro uye inodonhedzwa mafirimu nematerevhizheni eTV ayo anofukidza zvakanaka zvakawanda marudzi ese. Zviri nekuda kwezvikonzero izvo zvimwe inofanirwa kunge inofanirwa-kuve neyese yakaoma hard Kodi mushandisi. Pasina imwezve ado, ngatimbosvetukai mukati uye titarise maitirwo ayo.
Gonesa Anivikanwa masosi
Nhanho 1: Kutanga kumusoro, simudza iyo Ino yekuiswa mune yekutanga muenzaniso uye sarudza iyo 'Zvirongwa' icon kubva pane huru yekutanga skrini inoteedzerwa nekusarudza Masystems. Tsvaga iyo Wedzera-ons sarudzo uye sarudza iyo kuti uone zvimwe zvaunoda.
Nhanho 2: Mukati meZvekuwedzera-zvaunofarira iwe uchaona sarudzo ine zita rakatumidzwa Hazvizivikanwi mawanikwa. Iko zvakare kuchave neku nyore kwekuchinja switch iko kurudyi-ruoko rwechisarudzo ichocho. Ita shuwa kuti shanduko inoshandurwa kune On chinzvimbo kutitendera kuti tiwedzere matsva kuIri pasina nyaya.
Isa Icefilms Kodi Wedzera-pa
Nhanho 1: Misoro kudzoka kune iyo huru yekutanga skrini yeIri uye sarudza iyo 'Zvirongwa' icon uye kufamba kuenda File maneja> Wedzera chinyorwa.
Nhanho 2: Mukati me Wedzera chinyorwa sarudzo iwe unowana yemavara munda yakatove yakazara nevanhu ne nzvimbo yekubata. Sarudza iyo yekugadzirisa munda uye wedzera iyo inotevera URL chaizvo sezvaunoiwana pano: http://srp.nu
sarudza OK kubuda iyo yekupinda uye kuwedzera zita rekwaini. Ingodaidza izvi Super Repo kana zvakafanana. Sarudza OK kupedzisa uye kubuda.
Nhanho 3: Musoro kumashure kunze iyo huru menyu yeiyo Kodi yekuisa uye sarudza iyo Wedzera-ons sarudzo inoteverwa nekusarudza iro bhokisi-senge icon (Wedzera-ma browser browser). Sarudza iyo Isa kubva ku zip zip sarudzo uye tsvaga iyo Super Repo media nheyo iyo isu tichangobva kuwedzera.
Nhanho 4: Sarudza Super Repo uye wofamba kuenda Krypton> repositories > superrepo. Mukati meiyo dhairekitori, iwe uchawana zip yefaira yauchazoda kusarudza uye kuisa.
Nhanho 5: Misoro kudzoka kuAdd-browser browser uye sarudza iyo Isa kubva pane repository sarudzo. Zvino enda ku SuperRepo Repositories > Wedzera-pane repository> SuperRepo Chikamu Video. Pano, sarudza gadza kuenderera mberi. Ehe, izvo ndizvo, ichi chiitiko chisina kujairika chekuisa chinyorwa kubva mukati mekodhi. Havaite chero chinhu chakareruka, vanodaro?
Nhanho 6: Svetukira kumashure kuAdd-ons browser, uye unofamba kuenda Isa kubva pane repository> SuperRepo Chikamu Vhidhiyo sarudzo uye ipapo Vhidhiyo Wedzera-maawa. Mukati meiyi, iwe uchawana kuwedzera-pa zita rekuti chero Icefilms or Icefilms FIX, zvaunogona kusarudza uye ipapo gadza.
Ndizvo! iyo Icefilms yekuwedzera-inofanirwa kunge iri kumusoro uye ichimhanya pane yako Kodi yekutanga!
Maitiro Ekutarisa NFL pane Kodi: Yakanakisa 2017 Wedzera-maNFL Mvura Kurarama
Nzira Yokugadzirisa Sei "Update Yakakundikana" Error
Maitiro ekuisa SuperRepo Repository pane Kodi
Yakanakisa Kodi Wedzera-on yeRararama TV muna 2017 uye Maitiro Ekuchengeteka
KODI STREAM ZVESE
Atom Reborn Kodi Add-on - How to Install and Features
Nzira Yokubvisa Sei Ko Inovaka uye Kudzorera Ko kune Yayo Yepato State
Isai paFires paFirestick uye Fire TV ne USB
Mayweather vs McGregor pa Kodi: Live Streams yeMayweather vs McGregor